कसले र किन हान्दै छ बम ? सरकारले पनि किन सजाय दिन नसकेको अपराधीलाई? – Rastriyapatrika
कसले र किन हान्दै छ बम ? सरकारले पनि किन सजाय दिन नसकेको अपराधीलाई?
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित कांग्रेसको चुनावी सभालाई लक्ष्य गर्दै गत मंगलबार दाङमा गराइएको बम विस्फोटमा परी घाइते भएका म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको बुधबार बिहान उपचारक्रममा मृत्यु भयो । देउवाले सम्बोधन गर्दैगर्दा नजिकै भएको विस्फोटमा चौधरीसहित नौ प्रहरी घाइते भएका थिए ।
सुरक्षाकर्मीकै ज्यान जाने गरी भएका घटनामा संलग्नको पहिचान गर्न नसक्नु र ‘अनुसन्धान हुँदै छ’ भन्ने ओठे जवाफ मात्रै दिइनु गम्भीर विषय ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै आँखाअगाडि भएको विस्फोटको घटना त देख्दैनन् भने मुलुकभर भएका घटना कसरी देख्लान् ? गृहमन्त्रीसमेत रहेका उनले विस्फोट गराउँदै हिँड्ने समूहसमेत चिन्दैनन् । अब प्रधानमन्त्री देउवाले जवाफ दिने बेला भएन र ! सबै सुरक्षा निकायले विस्फोट गराउने समूहबारे स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरिसकेका छन् । सायद ती समूहका व्यक्ति पक्राउ गर्न र उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सुरक्षा निकायले समेत प्रधानमन्त्रीको आदेश पर्खिरहेका छन् । विस्फोट गराउने समूहले अहिलेसम्म घटनाको जिम्मा लिएको छैन ।
मंसिर ३ मा रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले ‘उच्छृंखल र निर्वाचनविरोधी’ समूहले विस्फोट गराएको बताए । को हुन् त उच्छृंखल र निर्वाचनविरोधी समूह ? यसबारे न प्रधानसेनापतिले मुख खोल्न सके न त त्यहीं उपस्थित रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले ।
विस्फोटन गराउँदै हिँड्ने समूह बलियो र राज्यचाहिँ उनीहरूको अगाडि निरीहझैँ बनेको छ । सुरक्षाकर्मीकै ज्यान जाने गरी भएका यस्ता घटनामा संलग्नको पहिचान गर्न नसक्नु र ‘अनुसन्धान हुँदै छ’ भन्ने ओठे जवाफ मात्रै दिइनु गम्भीर विषय भएको खबर आजको अन्नपूर्णपोष्टले छापेको छ ।